Ok, iro zita rinogona kunge riri kutsausa zvishoma. Asi zvakawana kutarisisa kwako uye zvakakusvitsa iwe kuti ubayare kuenda kune iyo posvo, handizvo here? Izvo zvinonzi linkbait. Hatina kuuya neinopisa blog post zita senge pasina rubatsiro ... isu takashandisa Portent's Zvemukati Idea jenareta. Vanhu vakangwara paPortent vaburitsa pachena kuti zano rejenareta rakauya sei. Icho chishandiso chakakura chinobata pamatanho ekubatanidza ari